UBEN AFFLECK UGXUMA MALUNGA NENTOMBI YAKHE UJENNIFER LOPEZ; UTHI 'UYAMOYIKA' - HOLLYWOOD
UBen Affleck ugxuma malunga nentombi yakhe uJennifer Lopez; Uthi 'uyamoyika'
UBen Affleck noJennifer Lopez bebesoloko besenza imixholo yesizathu sokuba i-duo ivuselele ukuthandana kwabo ngaphambili kwezi nyanga zili-12. Esi sibini kwangoko kule nyanga songeze ikhaphethi ebomvu krwe kwiVenice Film Festival. U-Affleck uthathelwe ingqalelo kolunye udliwanondlebe lwangoku wathi ukhwankqisiwe yimpembelelo kaJennifer Lopez emhlabeni.
UBen Affleck wonke umvuzo ngenxa yentombi yakhe uJennifer Lopez
Nje ngokuba Iphepha lesithandathu , UBen Affleck uthethe esidlangalaleni malunga nentombi yakhe, uJennifer Lopez, ngexesha lokuqala ukusukela ngokuvuselela uthando lwabo emva kweminyaka ephantse ibeyi-20 kudliwanondlebe olutyhilwe Iveki . Umlingisi oneminyaka engama-43 ukhankanyiwe, ndiyoyika ukuba yintoni impembelelo kaJennifer emhlabeni. Okona kuninzi, njengomculi, ndinokwenza imifanekiso eshukumayo ehambisa abantu. UJennifer uchukumise iqela elikhulu labantu ukuba bazive ngathi banesihlalo edesikeni kolu hlanga.
Sean spicer rebecca claire miller
Wongeze wathi, Into endinokukwazisa yona kukuba ndizibonele ngokwam umzekeliso owahlulayo njengoko ndibonile, kaninzi-ninzi, amaxesha ngamaxesha, amantombazana asebenzisa imibala uJennifer kwaye ndimazisa ngomzekelo wakhe Inenekazi elomeleleyo nenenekazi eliphumelelayo kwaye lifuna inani elifanelekileyo kwilizwe labo leshishini kuthetha ukuba kubo.
UBen Affleck kunye noJennifer Lopez's crimson carpet debut
UBen Affleck noJennifer Lopez benze i-carpet yabo ebomvu kwi-Venice Film Festival bavuselela uthando lwabo ekuqaleni kweenyanga ezili-12. Esi sibini siye sabonwa sangana kwaye sincamisana ngelixa behla kwikhaphethi. U-Lopez wanxiba ingubo emhlophe ye-Georges Hobeika enentamo ejijekileyo kunye nesinqe esiphakamileyo samathanga ngelixa u-Ben Affleck enxibe i-tuxedo emnyama ye-Dolce & Gabbana nge-bowtie. Ababini baya kwimiboniso bhanyabhanya IDuel yokugqibela , ebhalwe ngu-Affleck kunye neenkwenkwezi kunye noMat Damon wexesha elide.
U-Lopez no-Affleck bavuselela uthando lwabo kwangoko kwezi nyanga zili-12 emva koko, uJlo wamqhawula uAlex Rodriguez. Esi sibini songezelwe ngomhla we-2004 kwaye zonke zazimiselwe ukubopha iqhina nangona zazisaziwa ngokuba zingaphandle komtshato. Esi sibini sihlala sivela rhoqo kwiikhaphethi ezibomvu emva komnyhadala wefilimu waseVenice. UBen noJlo bebezimase iMet Gala 2021 ngokudibeneyo.
Izigaba: Hollywood Iwiki Iindaba
I-tricia bigelow tom girardi
NguJacob cruikshank isitabane
UMat smith uEmily Hampshire
I-kendra hatcher ugqirha wamazinyo dallas
inde kangakanani yung miami ntombazana yedolophu